Son Last Steam Ser ပြပွဲကို Alsancak ဘူတာတွင်ပြသခဲ့သည် - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirကို 'နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့' 'ပြပွဲဖွင့်လှစ်အတွက်နေ့စွဲ Alsancak ဘူတာ
24 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, PHOTOS, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Gary ၏သမိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့ပြပွဲအရေးပေါ် alsancak ခဲ့သည်
1943 အရေအတွက် 56548 နှစ်ပေါင်းကတည်းကတစ်ဦး '' နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့ '' ၏ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှအပေါငျးတို့သရေးဆွဲ 35 ကျော်တိုင်းပြည် running အတွက်နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့ရထား Izmir အတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲဖြစ်ပါသည်တူရကီရဲ့ဝတ်ပြု, အ Alsancak ရထားဘူတာပေါ်တွင်ဧည့်သည်များမှယူနီဖောင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) 163 ။ တူရကီကနောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့ရထား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းပြေးကို 'နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့' 'တို့ကခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများနေရာယူအဖှဲ့အစညျးမြား၏နှစ်ပတ်လည်အဘို့ပြင်ဆင်သောဓာတ်ပုံပြပွဲဟာ Alsancak ရထားဘူတာအပေါ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ကိုယ်နှိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရေးပါမှုနှင့်ဓာတ်ပုံများရှိပါတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မကြာသေးမီကရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းမှ Kuyucak TCDD န်ထမ်း Hakan အတွက် dispatch အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြ 56548 အရေအတွက်ကခေါငျးဓာတ်ပုံတွေစီမံကိန်းအောက်တွင်ပေါ်ထွက်လာသော 2010 အားဖြင့်ဒဏ်ရာရ, 35 ဓာတ်ပုံကိုကတည်းကအလုပ်လုပ်တယ် သူသည်ပြပွဲ၌ကြီးသောအတိုးကိုမြင်တော်မူ၏။ 80, ဓာတ်ပုံစီမံကိန်းအောက်တွင်ယူကြောင်းညွှန်ပြ Hakan ဒဏ်ရာရ "ကျနော်တို့ကဒီပြပွဲများအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းကန်မှ Izmir ၏ Alsancak ဘူတာဓာတ်ပုံကို 35 35 ယူဆောင်နဲ့ကျွန်မနေသမျှကာလပတ်လုံးရထားပြေးအဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေယူဆက်ပြီးလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
ပြပွဲ TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Selim Koçbay TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Izmir ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအာဗေလအမိန့်,3။ ဒုတိယဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mustafa Keskin နှင့် Nizametd ပန်း, ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံသားများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ Koçbay, ဓာတ်ပုံတွေကြီးမားတဲ့ပြပွဲတင်ဆောင်လာသော myom နှင့်အတူတွားပြပွဲ၏ပြင်ဆင်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Alsancak Garda TCDD ရဲ့ 158 ။ ကြောင့်နှစ်မြောက်ဓာတ်ပုံပြပွဲဖွင့်လှစ် 28 / 09 / 2014 Alsancak Garda TCDD ရဲ့ 158 ။ ကြောင့်နှစ်မြောက်ဓာတ်ပုံပြပွဲဖွင့်လှစ်: အစ္စတန်ဘူလ်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာအသင်း (İZAFOD) TCDD 158 ။ 23.09.2014 ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏သမိုင်းဝင်နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် Alsancak ရထားဘူတာ "မီးရထားဘူတာရုံများနှင့် Tools များ" ဓာတ်ပုံကိုပြပွဲဖွင့်လှစ်။ ဒါရိုက်တာ Selim နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. KoçbayİZAFODအစည်းအရုံးသမ္မတကပြားပေးထားခဲ့သည်xnumx.bölg။ ထိုကဲ့သို့သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနေ့၌ရထားလမ်းရဲ့စမှတ်အတွက်အဖွင့် Nizamettin Flower, Alsancak ၏နှစ်ပတ်လည်မှာဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး railwaymen များအတွက် Anatolia Aydin အတွင်းပထမဆုံးမီးရထားလမ်းဒုစကားပြောနှင့်အဖွင့်နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖျောရထားလမ်းဓာတ်ပုံကိုပြပွဲနေရာဟာİZAFODအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာပြİZAFODဓာတ်ပုံဆရာအဖွဲ့ဝင်များဆွဲဆောင် ...
Alsancak İzro Garda ပြပွဲ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ဖွင့်လှစ် 24 / 04 / 2014 Alsancak İzro Garda ပြပွဲဖွင့်လှစ်: အကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Izmir Alsancak ဘူတာလမ်းညွှန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးစီမံကိန်း၏အတွင်းလွှမ်းမိုးသဖြင့်, ကလေးများများကပန်းပု၏ပြပွဲများအတွက်ကျင်းပခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသိအမြင်၏သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများ, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဆက်, ဖွင့်လှစ်ဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲမှာပြောသောသူကို3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Selim Koçbayငါတို့ကလေးတွေကိုသမိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများကိုရဖို့နဲ့ဒီပြပွဲအတွက် Entity ပေးအခွင့်အလမ်းများကို၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါအနုပညာရှင်ဘေးတွင်သည်သူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအနုပညာ၏ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအသိပညာတိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်ရန်။ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ၏ Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (İZRO) ဥက္ကဋ္ဌ N ကိုမှာ N ကို ALTINEL နိုင် ...
Kars ရထားဘူတာများတွင် Display ကိုပေါ်ရထားက Black သမိုင်း Steam 19 / 07 / 2018 Black ကရေနွေးငွေ့ရထားဘူတာ Kars အတွက် Display ကိုအပေါ်သမိုင်း: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 76 က Black ရထားနှစ်သမိုင်းများတွင်အသုံးပြုနှစ်ပေါင်းများစွာ Kars ရထားဘူတာများတွင်ပြသထားသည်။ မကြာသေးမီကပထမဦးဆုံးမြင်က Black ရထားနှင့်အတူ Orient Express ကို၏သမိုင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံတို့သည်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိုမြင်လျှင်, Kars မှလာမယ့်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်များတင်ဆောင်လာသောက Black ရေနွေးငွေ့ရထား, အခြိနျ မှစ. ရုပ်သိမ်းနည်းပညာနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသောအဆိုပါရထားလမ်းဘူတာရုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြခံရဖို့တစ်လွမ်းဆွတ်မှုအတွက်သူတို့တည်ရာအရပ်ခေါ်သွားတယ်။ Kars ရထားဘူတာရုံ, နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်ပြည်တွင်းနှင့်အလုပ်အများဆုံးက Black ရေနွေးငွေ့ရထား, အ Kars မီးရထားဘူတာနီးပါးသင်္ကေတမှာပြသ ...
Alsancak Garda TCDD ရဲ့ 158 ။ ကြောင့်နှစ်မြောက်ဓာတ်ပုံပြပွဲဖွင့်လှစ်
Alsancak İzro Garda ပြပွဲ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ဖွင့်လှစ်
ဇူလိုင်လ 15 Epic ဓါတ်ပုံပြပွဲတူရကီမီးရထားဘူတာရုံများတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
orient Express ကိုအပြည့်အဝ "အို" ဒီ hood ကိုဓါတ်ပုံပညာပြပွဲaçılıl Kars မီးရထားဘူတာခဲ့သည်
Bursanın 16 မီးရထားနှစ်ပတ်လည်ဓါတ်ပုံပြပွဲဘူတာ TCDD ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ရုန်းကန်